Umhla My Pet » 3 Tips ukunenza Egqibeleleyo Chick Magnet!
ukubuyekezwa: UCanzibe. 25 2020 | 2 min ukufunda
Kukho abantu abenza akukho nto, kodwa baphela kukufumana ingqwalasela engaphezulu nemazi ngaphezu no ku kuphatha. Kukho abanye abantu bazama zonke izinto kunokwenzeka ukuba umntu nenekazi, kodwa kunzima woo nokuba ngumfazi enye. Ngezantsi amanye amacebiso amadoda lilungu kudidi lwesibini; zilandelayo la macebo aza kubanceda ukuba baqonde into kanye bangazenza abantu abe nomazibuthe intshontsho.
Funda indlela zoqhagamshelwano iliso
Ukuba akukho intshontsho umazibuthe yendalo, awunako ukulindela ukubona zonke Izibini zamehlo zilandelayo kuwe. Ngoko ke, njengoko ukungena kwigumbi ezaliswe neqela labantu, kufuneka kuqala ayiskene ukufumanisa lokuqala ingqalelo yendalo kangakanani ngaba niqhawula.
Musa ukuzama ukwenza nantoni na osisiyatha ndimbambe abanye’ ingqalelo; khumbula ukuba apha ukutshixa sana namabhinqa amahle hayi ukuzimisa njenge ngumhlekisi. Njengoko scan egumbini, kufuneka ufumane umntu ebonisa umdla kuwe ubuncinane enye; xa ubona wakhe ukhulisa iintshiyi ekuncumele kuwe, uman 'uncuma kwaye zama ukufikelela kuye ukuba ezinye uhlobo lonxibelelwano.
Namangaliswa kuthekani ukuba anithanga ukuza kulo nabani itshixa Neenkophe zakho okanye bencumile kuwe? Oko kwenzeke ukuba kwenzeke ukuba siye kwisikeni olucothayo elilinganisiweyo. uninzi lwabasetyhini (ingakumbi abo ukufumana abantu seyinikiwe yindinisa kwigumbi) ukuqhubeka bekhangele ngeenxa ngethuku ukufumanisa bafanelwe ngokwaneleyo ukuba umntu nje wangena gumbi; ukuze, isken olucothayo kuvumela ukwenza ukujongana ubuncinane esinye kuzo.
Yifumane, musani kulinika
Oku kwaye ezanyiweyo kwaye yavavanywa indlela; inenekazi ngababulali inkulu ehlabathini kuyenza kwaye ufumane iziphumo kakhulu. Ukuze ufumane ingqalelo ababhinqileyo, kuya kufuneka bafunde ngoyaba. Njengokuba, Ukuba ufuna wayengoyena mfazi enomtsalane kwiqela ezine okanye ezihlanu ukubonisa umdla kuwe, ukuhamba nje kwiqela azokuthetha onke amantombazana ngaphandle kwalowo ofuna kulukuhla.
Women, enoba mhle okanye siqinisekile ukuba, undithiyile ukuba ukutyeshelwa. Ngokubanika zero ingqalelo kuthetha baya kuqalisa ukwenza izinto ukuphumelela uxabiso.
Yiba ukulungele ukubuza imibuzo
Xa udibana umfazi okokuqala, endaweni ethetha ngokwakho, ukubuza imibuzo. Women kungakhathaliseki ubudala babo, imvelaphi zemfundo kunye nobungcali nje Ndiyakuthanda ukuthetha ngeziqu. Ngoko ke, bathanda nje yokuba xa udibana nomntu ngubani ngumphulaphuli olungileyo; iimagnethi intshontsho badla abaphulaphuli igqwesileyo ehlabathini.
Buza ezithandwa zakhe, amaphupha akhe, nobomi bakhe luphela; uya kuthetha, intetho, kwaye uthethe. Qinisekisa ukuba uphulaphule nantoni yena uthi ngenyameko njengoko kunokuba iintloni xa ucela icebiso kwaye okunikela wena eneneni akaliphulaphuli kuye.
Amacebiso ngasentla zibonisa ukuba abe nomazibuthe intshontsho ubani kufuneka senze okungakumbi sijonge nje enuka okulungileyo. Ukuze ufumane guys ingqalelo abangamabhinqa kufuneka kuqala ube umntu egudileyo; zonke ezinye iimpawu ezithi elilandelayo.
12 Kufuneka izityebi Kuba Mrs. Kunene
Ingaba umncwasile Wena? Khangela Ezi Iimpawu!